Thenga iZiko leMizobo yeYouTube yesiqhelo- iiPSPals
Thenga ukulungiswa kwe-YouTube
Thenga iZiko leMizobo yeYouTube
Izinketho zoYilo loMzobo:
Uyilo lweBhanari eyi-1
$80 Thenga ngoku
1 Uyilo lweThupha elincane
$25 Thenga ngoku
Iividiyo ezi-3 zoYilo lweThupha
$70 Thenga ngoku
Iividiyo ezi-6 zoYilo lweThupha
$130 Thenga ngoku
Ngaba ibhanile yejelo lobuchwephesha kunye nezithonjana zevidiyo ziya kuyiphucula itshaneli yam?
Kubaluleke kangakanani ukuyila izithonjana zevidiyo zobungcali?
Ukuba ujonga, uya kubona ukuba zonke i-YouTubers eziphambili zisebenzisa iithonjana zevidiyo zesiko ukwenza iividiyo zazo zivele kwaye ufumane ukucofa ngakumbi. Umgangatho, izithonjana zesiko zenza ukuba ividiyo yakho ibonakale kwiividiyo ezinokuba neembono ezininzi okanye zithandwe ngakumbi kunezakho. Nokuba ividiyo yakho ibekwe ezantsi kwiziphumo zokukhangela, i-thumbnail yesiko iya kutsala umdla wabo kwaye ke ibakhuthaze ukuba batyelele ividiyo yakho. Izithonjana zesiko zikwanceda ukuphucula i-YouTube kunye nenqanaba lokukhangela kuGoogle, ngaloo ndlela kukwenzela ukugcwala kwezinto eziphilayo.
Ngaba ungasebenza ngalo naluphi na uhlobo lwesitayile seYouTube?
Kuthekani ukuba andiluthandi uyilo, okanye ndifuna utshintsho?
Inkqubo yonke ithatha ixesha elingakanani?
Fumana umda wakho wokhuphiswano nababhalisi be-YouTube simahla usebenzisa inethiwekhi ye-SubPals 'yokunikezela!
Iikhosi zoqeqesho zeVidiyo
Ungabakhuthaza njani ababhalisi beYouTube ukuba bavakalise iiVidiyo zakho rhoqo?
Iingcebiso zerhafu zaBangedali beYouTube baseMelika
Ungazifumana njani iividiyo zakho zeYouTube ukuze ube kwiZinga eliPhakamileyo ngo-2021
Ngaba Unokwenza imali ngeeShorts zeYouTube?
Ukukhetha i-Niche eyiyo yeChannel yakho ye-YouTube ngo-2021